Vondrona Foton Motor
Manolotra vokatra sy serivisy ampiana sarobidy avo lenta ho an'ireo mpampiasa eo an-toerana, ary mampihatra ny fenitry ny famokarana fiara sy ny fivezivezena manerantany amin'ny faritra hafa miaraka amin'ny orinasany.
Mampivoatra haingana ny orinasam-pifandraisana fiara.
MITONDRA orinasa indostrialy Kaina
Ny Foton Motor Group dia naorina tamin'ny 28 Aogositra 1996 ary ny foibeny dia any Beijing, Sina. Miaraka amin'ny sehatry ny fandraharahana manarona fiara mifono varotra feno, anisan'izany ny kamio antonony sy mavesatra, kamio maivana, fiara fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bokatra ary fiara mpamokatra 9000.000 eo ho eo. Ny sanda Foton Motor Brand dia nohamarinina sahabo ho 16,6 tapitrisa dolara amerikana, laharana No. 1 nandritra ny 13 taona nifanesy tao amin'ny sehatry ny fiara fitaterana entana any Sina.
Tonga mpanamboatra fiara mpitondra varotra manerantany amin'ny fanatontoloana.
MISIONA & VISIONA
Hatramin'ny niorenany, Foton Motor dia nifantoka tamin'ny fananganana ho avy feno firindran'ny olombelona, ​​ny fiara ary ny natiora.
ny sarin'ny diamondra dia notononina ho prototype an'ny Foton Motor, io dia midika teknolojia, kalitao, vidiny ambony ary faharetana. Foton "Brilliant Diamond" dia ampitahaina amin'ny diamondra miteraka, izay midika fa nanolo-tena ho amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ny fikarakaran'olombelona ary ny hatsaran'ny firindrana i Foton.
Foton Motor no hitarika ny làlan'ny hoavin'ny fivezivezena, hamorona maharitra ireo soatoavina mandrakizay sy miavaka ho an'ny fiadanan'ny mpanjifa, ny fiaraha-monina ary ny olombelona.
Izahay FOTONER dia mikendry hatrany ny hanao fanamby amin'ny tanjona avo lenta, manararaotra ny fivelarana maharitra, mampiakatra ny fenitra ho an'ny fiankinan-doha, azo itokisana ary fahafaham-po ny mpanjifa, mitondra fiara maoderina amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena amin'ny teknolojia tafiditra.
TEKNOLOHIA MITARIKA AMIN'NY HOAVY
Mitarika ny mpamokatra fiara iraisam-pirenena manerantany.
Tamin'ny volana aogositra 1996 dia naorina tao Beijing China ny Foton Motor.
Teraka ny kamio FOTON AUMAN voalohany.
Tamin'ny volana Aogositra 2002, dia nahomby tamin'ny fivoahan'ny fivorian'ny fivoriambe tany Sina ny FOTON AUMAN.
AUV BUS, LALANA FIVORIAMBEN'NY ASSEMBLY.
Tamin'ny volana novambra 2004, ny fiara faha-1 000 000, ny bus FOTON AUV, dia nivily lalana tamin'ny tsipika fivoriambe.
AUMAN ETX EROPA ETO.
Tamin'ny volana septambra 2006, nanangona an'i Auman ETX ny tranombakoka teknolojia Alemanina Speyer. Ny ampitso, Auman ETX dia mandray anjara amin'ny hazakazaka fampisehoana miaraka amin'ny kamio Mercedes-Benz eo amin'izao tontolo izao malaza Formula One F1 ao Hockenheim.
FOTON CUMMINS JOINT VENTURE Niorina.
Tamin'ny volana martsa 2008 dia naorina ara-dalàna ny fiaraha-miasan'ny Foton sy Cummins, Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd.
Nalefa ny sary LOGO vaovao FOTON.
Tamin'ny volana Aogositra 2010 dia namoaka ny sary famantarana marika vaovao "Brilliant Diamond" i FOTON, izay midika fa nanolo-tena ho amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ny fikarakaran'olombelona ary ny hatsaran'ny firindrana i Foton.
NY FIARA VOTOTRA FOTON'NY 5000.000 dia nilahatra nanerana ny tsipika fivorian'ny fivoriambe.
Tamin'ny volana septambra 2011, ny fiara 5.000.000 an'ny FOTON dia nivily lalana tamin'ny fivorian'ny fivoriambe tany Chine.
FOTON DAIMLER AUTOMOTIVE JOINT VENTURE Niorina.
Tamin'ny volana febroary 2012, ny orinasa iarahan'ny Foton Daimler Automotive Co., Ltd. dia natsangana tao Beijing China.
Tamin'ny volana aprily 2013 no van-kilasy fandraharahana voalohany - FOTON VIEW CS2 natomboka tany Sina.
Tamin'ny volana Janoary 2014 dia nandefa an'i TUNLAND i FOTON hifaninana amin'ny Dakar 2014 voalohany.
Tamin'ny volana Janoary 2016 dia niditra tamin'ny famoriam-bahoaka DAKAR 2016 i FOTON TUNLAND sy SAUVANA.
Tamin'ny volana septambra 2016, kamio mpanelanelana amin'ny asa vaovao sy mavesatra vaovao FOTON - AUMAN EST, niseho tao IAA any Alemana
FAMONJENA FIVORIANA MOMBA NY FOTON
Tamin'ny volana novambra 2016 lasa teo dia natomboka tany Shanghai China ny kamiaona voalohany mitondra fiara FOTON.
FOTON ZF MIJORO VENTURA Niorina
Tamin'ny volana septambra 2017 dia naorina ny fiaraha-miombon'antoka Foton ZF. Natomboka ny lanonana famotehana ny tetik'asa fandefasana mandeha ho azy farany ambony Foton & ZF.
Mitarika ny orinasam-pifamoivoizana any Shina
Mandrosoa ho toy ny Global Corporation